(Europe) 24 Dis 2017. Sidaan horey idin kugu balan qaadnay waxaan si joogta ah idin kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ay Jariiradaha ka qoreen xanta Suuqa kala iibsiga maadaama lagu dhow yahay Bisha Janaayo oo uu dib u furmayo Suuqa.
Haddaba Aqriso wararka xanta ay saakay oo Axad ah wargeysyada ka qoreen Suuqa kala iibsiga:
Macallinka Tottenham Mauricio Pochettino ayaa diyaar u ah inuu bilaabo qorshaha uu Janaayo ugu dhaqaaqayo xiddiga qadka dhexe ee Everton Ross Barkley, 24-jir iyo daafaca garabka ee Man United Luke Shaw, 22-jir si ii dib ugu soo nooleeyo isku daygooda koobabka. (Sunday Express)
Wakiilka Olivier Giroud ayaa usbuucan u jooga London wada hadalo yiddidiilo leh ee ku aadan mustaqbalka 30-jirka ee kooxda Arsenal. (Mirror)
Macallinka Manchester City Pep Guardiola ayaa xiiseynaya 24-jirka qadka dhexe Shakhtar Donetsk ee Fred iyadoo ay City qorsheynayso inay xoojiso dooqyada qadkeeda dhexe ee xilli ciyaareedka soo socda. (Mail on Sunday)
Arsenal ayaa uga socod dheereysay Manchester United iyo Chelsea raacdada loogu jiro 20-jirka garabka kaga ciyaara Bayern Leverkusen ee lagu qiimeeyay 30-ka milyan Leon Bailey. (Mirror)
Inter Milan ayaa dooneysa inay amaah ku qaadato 28-jirka laga nacay Manchester United Henrikh Mkhitaryan. (Mail on Sunday)
Daafaca Southampton Virgil van Dijk, 26-jir ayaa laga soo tagay shaxda kooxdiisa ee shalay laakiin tababare Mauricio Pellegrino waxba kama dhihin suuro galnimada uu Janaayo ugu dhaqaaqi karo Liverpool. (Liverpool Echo)
West Ham ayaa diyaar u ah inay dar dar galiso u dhaqaaqisteeda 27-jirka qadka dhexe kaga ciyaara Bournemouth ee Harry Arter, laakiin sidoo kale Everton ayay wax ka waydiisay 28-jirkeeda qadka dhexe ee Morgan Schneiderlin. (Mirror)
Hammers ayaa laga soo diiday dalabkii hore ee 8-milyan ay ka gudbisay Harry Arter. (The Sun)
Harry Kane oo ka saramari kara Lionel Messi tartanka gool dhalinta 2017
Harry Kane oo soo bar bareeyay Alan Shearer